Musa ukubulala iVibe yam nguSigrid - Okunye
Musa ukubulala iVibe yam nguSigrid
Lo mhobe ubhinqileyo obhinqileyo ophefumlelweyo waphefumlelwa siseshoni yokurekhoda eyintlekele yaseLondon kunye nabanye abavelisi abangachazwanga ngamagama.
Uyakuthanda ukundidiliza, uyandikhetha
Emva koko ndakhe ngathi ndixhomekeke kuwe
'Babenyanisile,' utshilo uSigrid kwi-BBC yala madoda kuthethwa ngawo. 'Akunzima kangako ukuba nembeko, uyazi?'
Abavelisi abangamadoda abaneminyaka ephakathi bathetha ngoSigrid, bamxhasa kwaye benza amagqabantshintshi. Imvumi yolutsha yaseNorway uxelele I-Telegraph yemihla ngemihla ukuba uyavuya ukuba ufumene indlela yokubeka umsindo wakhe kumadoda kuloo seshoni ukuba ayisebenzise kakuhle.
'Khange ndithethe ndathi,' F --- oku, awunakundiphatha ngale ndlela '; I-p ----- indicimile nangakumbi kunenyani yokuba bezingaziphathi kakuhle, utshilo uSigrid. Ndacinga ukuba ndingohlobo lomntu lokuthetha into. Kodwa kunzima, ukuba uyintombazana, ukwazi xa usabela kakhulu kwaye kufuneka uthethe nini. Kwaye intombazana encinci, ngokunjalo. Ndineminyaka yobudala kunye nesondo [ngokuchasene nam]
Oku kwabonisa ukuba yingoma kaSigrid. I-NME ndimbuzile ukuba ulindele impumelelo enkulu yomkhondo. Uphendule wathi:
Bendingayilindelanga ukuba ihambe iye kude kwaye indinike amathuba amaninzi, kodwa bendisazi ukuba yingoma ekhethekileyo. Ndiyayazi umzuzu ophuma kum estudiyo ukuba uyingoma ebalulekileyo kum. Andazi nje ukuba kwinqanaba elingakanani. Inye: ibiyingoma endingakwaziyo ukuphuma entlokweni yam. Isibini: inomyalezo obalulekileyo. Kwaye ezintathu: Ndiyayithanda-andikwazi ukusuka kuyo. Ingoma imalunga nokungahlonitshwa ngenxa yokuba ungubani kwaye ndicinga ukuba inento yokwenza kubantu abancinci. Ndifumana abantu abaninzi besithi kum: 'Ndizibona ndikule ngoma.' '
marvin gaye aint akukho ntaba iphakamileyo ngokwaneleyo amazwi
bendicinga ukuba ndikuvile uhleka amazwi
Ngubani ovuma ukuba ndiza kubakho
akunyanzelekanga ukuba ube yinkosana entle
apha kuwe neil iingoma ezincinci